David Luiz oo si weyn u go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea iyo talaabada xigta uu qaadi doono – Gool FM
David Luiz oo si weyn u go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea iyo talaabada xigta uu qaadi doono
(Chelsea) 12 Jan 2019. Daafaca reer Brazil ee David Luiz ayaa si weyn u go’aamiyay xirfadiisa iyo mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, sidaasi waxaa ka hadashay saxaafada gudaha dalka England.
Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa wuxu daboolka ka qaaday in David Luiz uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore reer Portugal ee Benfica ka dib dhamaadka qandaraaskiisa haatan ee kooxda Chelsea.
Chelsea ayaa si aad ah uga fiirsaneysa inay u kordhiso qandaraaska difaaceeda 30 jirka ah ee reer Brazil, ama ugu yaraan ay siiso heshiis cusub ee kaliya hal sano ah, taasoo ku qasbi karta in ciyaaryahanka uu iska diido.
Sida laga soo xigtay isla wargeyskan, David Luiz heshiiska uu haatan ku joogo kooxda Chelsea wuxuu dhamaanayaa xagaaga soo aadan, wuxuuna xaq u leeyahay xiliyada soo aadan inuu ogolaado u dhaqaaqista koox kale.
Wargeyskan kasoo baxa gudaha dalka England ayaa wuxuu kusoo gabagabeeyay warbixintiisan in mustaqbalka David Luiz uu ku laabanayo kooxdiisii hore ee Benfica, hadii aysan kooxda reer London ee Blues u soo bandhigin dalab munaasab ku ah difaaca reer Brazil si uu u saxiixo heshiis cusub.
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha West Ham United Vs Arsenal
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Brighton Vs Liverpool